WARBIXIN:- Ma gabaldhicii Al-shabaab baa kala firxadkaan soo wajahay saraakiisho, mise waa hana qaadkii qaranimadii Soomaaliya. |
WARBIXIN:- Ma gabaldhicii Al-shabaab baa kala firxadkaan soo wajahay saraakiisho, mise waa hana qaadkii qaranimadii Soomaaliya.
Waa sheeko cajiib ah marka la maqlo saraakiishii ugu sareysay Al-shabaab ayaa xilligaan kala firxanaaya ama iyaga qudhooda ayaa is gaad gaad isku haaya.
Micnooyin badan ayeey yeelan kartaa waxa hadda socda hadii la doono in lasii fasiro, laakiinse shacabka ayaa durba bilaabay aragtiyo kala duwan inay tani ka dhiibtaan.
Sheekh Xasan Daahir Aweys waa mid ku cararay gobalada dhexe una gacan galay maamulka Ximan iyo Xeeb, Mukhtaar Rooboow Abuu Mansuur isna waxaa la la’yahay meel uu jaan iyo cirib dhigay, waxaase ka daran Abuu Mansuur Al-amriiki oo isna dhaawac ahaa balse ku cararay mel howt ah, ha sheegin Sheekh Cali Dheere oo naftiisa ayuu u baqaayaa.
Hadaba ma waxaa la gaaray xilligii ay soo bidhaamaysay nabadii iyo qarannimadii umada Soomaaliyeed, mise waxaa la joogaa markii Al-shabaab buugooda uu soo laabmaayay.
Aduunyadaan la joogo wax walba way ka dhamaanaayaa, qolo walba oo mar soo baxdana calankeeda ayaa dhacaayo, waayo waxaa darbigii ka dhacay Hogaamiye kooxeed, maxkamadihii ayaa ku xigay oo daaqadda ka baxay, Al-shabaabna markaan waa Yaasiinka haloo qabto halka ay maraayaan ileen waa dhamaad howshooda.
Dowladda waxay haysataa hadda fursado balaaran oo ah in ay xiriir wanaag badan la sameeso saraakiishaa Al-shabaab ee dagaalamaaya iyo kuwa kala cararaaya si ay dhanka dowladda usoo maraan hubkana u dhigaan.
Laakiinse shacabka ayaa diidan dhamaan saraakiisha Al-shabaab ee gacan ku dhiiglayaasha iyo af ku dhiiglayaasha ah inay nabad dalka ku joogaan.